Incazelo yetshe le-crystal aventurine eluhlaza. Ifomu le-quartz eguquguqukayo
Amathegi i-aventurine, i-aventurine eluhlaza
Incazelo yetshe le-crystal aventurine eluhlaza.
Thenga i-aventurine yemvelo esitolo sethu
Uhlobo lwe-quartz, olubonakala ngokungaguquguquki kwalo nokuba khona kwe-platy mineral inclusions enikeza umphumela ocwebezelayo noma ocwebezelayo obizwa ngokuthi yi-aventurescence.
Umbala ovame kakhulu uluhlaza okotshani, kepha futhi ungaba owolintshi, onsundu, ophuzi, oluhlaza okwesibhakabhaka noma ompunga. I-fuchsite ethwala i-Chrome (inhlobonhlobo ye-muscovite mica) ukufakwa okudala futhi kunika isiliva eliluhlaza noma eliluhlaza okwesibhakabhaka. Amawolintshi nonsundu kubangelwa i-hematite noma i-goethite.
Ngoba liyidwala, izakhiwo zalo zomzimba ziyahlukahluka: amandla adonsela phansi athile angaba phakathi kuka-2.64-2.69 futhi ubunzima bawo buphansi ngaphezudlwana kwe-quartz eyodwa-crystal cishe ngo-6.5.
I-Aventurine feldspar noma itshe lelanga lingadidaniswa ne-quartzite ewolintshi nebomvu, yize eyokuqala ngokujwayelekile ibonakala ngokusobala. Idwala livame ukuboshwa futhi ukugcwala kwe-fuchsite kungayenza i-opaque, lapho kungenzeka ukuthi iphazanyiswe yi-malachite lapho uthi nhlá.
Igama elithi aventurine lisuselwa olimini lwesiNtaliyane elithi “a ventura” elisho “ngengozi.” Lokhu kushiwo ukutholakala kwenhlanhla kwengilazi ye-aventurine noma itshe legolide ngesikhathi esithile ngekhulu le-18. Indaba eyodwa ithi lolu hlobo lwengilazi ekuqaleni lwenziwa ngephutha eMurano yisisebenzi, esasivumela imibhalo ethile yethusi iwele "ensimbini" encibilikisiwe, lapho umkhiqizo wawubizwa nge-avventurino. Kusukela engilazini kaMurano igama lidluliselwe kumaminerali, akhombisa ukubukeka okufana ncamashi. Yize yayaziwa kuqala, itshe legolide manje selingukulingiswa okuvamile kwe-aventurine nelanga lelanga. IGoldstone ihlukaniswa ngokubonakalayo kulawa amaminerali amabili okugcina ngamatshe ayo ethusi, ahlakazeka ngaphakathi kwengilazi ngendlela efanayo. Imvamisa iba nsundu ngegolide, kepha ingatholakala futhi ngokuluhlaza okwesibhakabhaka noma oluhlaza okotshani.
Ubuningi bezimila eziluhlaza okwesibhakabhaka noluhlaza okwesibhakabhaka luvela eNdiya, ikakhulukazi ezindaweni eziseduze naseMsore naseChennai, lapho kuqashwa khona izingcweti ezinkulu. Okukhanyayo okumhlophe, okumpunga nokuwolintshi kutholakala eChile, eSpain naseRussia. Iningi lempahla liqoshwe ngobuhlalu nasemifanekisweni enezibonelo ezinhle kuphela ezifakwe kuma-cabochon, ngokuhamba kwesikhathi zahlelwa ubucwebe.
Inzuzo ye-Aventurine crystal nezakhiwo zokuphulukisa
Incazelo yetshe elihlaza eliluhlaza liyitshe lokuchuma. Kuqinisa izimfanelo zobuholi kanye nokuthatha isinqumo. Kuthuthukisa ububele nozwela. Ikhuthaza ukubekezela. Itshe liqeda abantu abangingiza kanye nemithambo yegazi enamandla. Iqinisa isimo somqondo womuntu, ivuselele ukuqonda futhi ithuthukise ubuhlakani. Izinsiza zokubona ezinye izindlela namathuba. Kuthulisa intukuthelo nokucasuka. Kuthuthukisa imizwa yenhlalakahle. I-crystal ibhalansi amandla wesilisa nowesifazane. Ikhuthaza ukuvuselelwa kwenhliziyo. Kuvikela ukungcoliswa kwemvelo.
I-Aventurine ngaphansi kwesibonakhulu
Kuyini okuhle kwe-aventurine?
Ilinganisela umfutho wegazi futhi ivuselele imetabolism, yehlise i-cholesterol. I-crystal inomphumela wokulwa nokuvuvukala futhi yehlisa ukuqhuma kwesikhumba, i-allergies, i-migraines, futhi ithambisa amehlo. Iphilisa amaphaphu, amasinusi, inhliziyo, amasistimu e-urogenital.
Iyini incazelo engokomoya ye-aventurine eluhlaza?
Incazelo yetshe le-aventurine eluhlaza likhipha amaphethini amadala, imikhuba nokudumazeka ukuze ukukhula okusha kwenzeke. Kuletha ithemba nethemba ngempilo, okuvumela umuntu ukuthi aqhubekele phambili ngokuzethemba futhi amukele ushintsho. Ithuthukisa ubuhlakani nomdlandla womuntu, futhi ikhuthaza ukubekezela ekuqondiseni izithiyo zempilo.
Ubeka kuphi itshe le-aventurine?
Beka idwala eliluhlaza le-aventurine empumalanga noma eningizimu mpumalanga yegumbi noma ikhaya ngobuningi, ubungqabavu nokukhula okunempilo. Igumbi lengane, igumbi lokudlela, ikhishi noma indawo lapho kuzoqala khona iphrojekthi entsha kungathuthukiswa ngetshe.
Yini efanekiselwa yi-aventurine?
Incazelo ye-Aventurine crystal. Eyaziwa njengetshe lokuchuma, impumelelo, inala, kanye nenhlanhla, ukuphatha ucezu lwale kristalu ephaketheni lakho, esikhwameni semali, noma e-altare lakho kuyogelezela enhlanhleni. Uhlobo oluvame kakhulu lwe-crystal luhlaza, okusukela kokuphaphathekile kuye kokuluhlaza okotshani, kuthi uma kupholishiwe, kungadideka kalula ne-jade eluhlaza.
Ungakwazi yini ukugqoka i-aventurine eluhlaza nsuku zonke?
I-aventurine eluhlaza iyitshe lokukhulisa amasosha omzimba lempilo yenhliziyo nokuphulukisa, ubungqabavu, nokuchichima. Yigqoke nsuku zonke ukusiza ukulinganisela i-chakra yenhliziyo.
Iyini chakra i-aventurine eluhlaza?
Ixhunywe ku-chakra yenhliziyo, i-aventurine eluhlaza ivula izinhliziyo zethu ukuba zithande ngokukhipha izithiyo ezingokomzwelo namaphethini wokucabanga angalungile avimbele inhliziyo ekupholiseni nasekuvimbeni amandla ethu okuthembela othandweni.
Ugqoka kanjani i-aventurine?
Kunconywa ukuthi ugqoke i-aventurine eluhlaza eduze kwenhliziyo yakho, noma kumaphoyinti wokushaya. I-aventurine eluhlaza okwesibhakabhaka kufanele ibekwe ku-chakra yeso lesithathu ukusiza ukuphulukiswa, noma ngaphansi komcamelo wakho ngenkathi ulele.
Ungakwazi ukufaka i-aventurine emanzini?
Njengekristalu eqinile iphephile emanzini. Njengoba i-rock crystal quartz, amethiste, i-quartz evuthayo, rose quartz, citrine, i-quartz yeqhwa, agathe, noma ijaspi.
Yini eheha i-aventurine eluhlaza?
Ngenye yamatshe kaNdunankulu ukuheha inhlanhla, ubuningi nempumelelo. Itshe linamandla aduduzayo ngemuva kwalo, futhi liyanconywa ngokusebenza ngezinkinga zemizwa ezingasonjululwanga.
Yiluphi usuku okufanele ngigqoke ngalo i-aventurine eluhlaza?
Noma ngubani angagqoka isongo eliluhlaza le-aventurine empumelelweni ephelele. Inikeza imiphumela emihle kubantu abaneMercury ebuthakathaka ku-horoscope. Abantu abazalwa ngomhla ka-5, 14 no-23 wanoma iyiphi inyanga bazoyigqoka.
Uyinakekela kanjani i-aventurine eluhlaza?
I-crystal ingaphela ngokuvezwa isikhathi eside elangeni, ngakho-ke gcina amagugu endaweni emnyama. Iphinde iphenduke emazingeni okushisa adlulele, ngakho-ke gcina leli litshe eliyigugu lisendaweni yemoto yakho ehlobo noma ebusika. Qiniseka ukuthi uhlanza leli tshe eliyigugu emanzini afudumele anensipho nendwangu ethambile noma ibhulashi.
Thenga i-aventurine yemvelo esitolo sethu segem
Senza ubucwebe obenziwe ngokwezifiso obuluhlaza njengamasongo wokuzibandakanya, imigexo, amacici e-stud, namasongo, imihlobiso elengayo… Ngiyacela Xhumana nathi kwesilinganiso.
Amathegi i-aventurine, ingilazi, itshe legolide
Itshe legolide eliluhlaza okwesibhakabhaka
Amathegi i-aventurine, Feldspar, I-sunstone
20% Isaphulelo etsheni lenyanga.
* itholakala kuze kube ngu-Ephreli 30, 2021